ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၆၅ ခုနဲ့ တွေ့ဆုံမည်
ပို့စ်တင်ချိန် - 5/11/2014 09:47:00 AM
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ (၆၅) ပါတီတို့ ရန်ကုန်မြို့က Sky Star ဟိုတယ်မှာ မေလ (၁၅) ရက် ကြာသာပတေးနေ့ မှာ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က RFA ကိုပြောပါတယ်၊
အဓိကကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနှစ်မကုန်ခင်ကျင်းပ မယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ကျင်းပမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်မယ့် နည်းဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ သဘောထား ကို ဆွေးနွေးရယူဖို့ ဖြစ်တယ် လို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးသောင်းလှိုင် က ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ဆီမှာက ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုရှိတယ်လေ၊ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်၊နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရော ၊နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ရော ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ နည်းဥပဒေတွေ ပြင်ဆင်ထား တာတွေရှိတယ် အဲ့မှာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တို့ဘာတို့လည်း ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်၊နောက်တခါ ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ကိုလည်း ညွှန်ကြားချက်အသစ် ထုတ်ပြန် ဖို့ကိုစီစဉ်ထားတာရှိတယ်၊ကျနော်တို့ စီစဉ်ထားတာတွေ အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကိုလည်းကျနော်တို့က ဒီမူကြမ်းတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့ပေါ့နော် သူတို့ရဲ့သဘောထားအကြံ အဥာဏ်လေးတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ အဲ့ဒီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာပဲ ကျနော်တို့ ရယူသွားပြီးဆောင် ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်"
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ နည်းဥပဒေမူကြမ်းထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပြင် တခြားမဲဆွယ်ဟောပြောလိုသူရှိ ရင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါဝင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်အပေါ် အခုမေလ (၁၅)ရက်နေ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သူတိုရဲ့ သဘောထားတွေရယူပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့လည်း ဦးသောင်းလှိုင်ကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုလည်း အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲဆန္ဒနယ်တွေအတွင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးသာ မဲဆွယ်ဟောပြောခွင့်ပြုမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက သူရဲ့ ပုသိမ်မြို့ ခရီးစဉ်အတွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးလေးကိုဘယ်တော့မှ မခံစားစေချင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ (၂၆...
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရင်လတ်အား ထိုင်းဆန္ဒပြသူများ ထော...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ Sims Ave မှ နေအိမ်တိုက်ခန်းတခုတွင် အ...
သိမှတ်စရာ နည်းပညာ အပိုင်း (၆)
Samsung Galaxy S5 အကြောင်း (Special review)
ရေရှားပါးမှုကြောင့် တောဆင်ရိုင်းများ ကျေးရွာများအထိ...
အိမ်ထောင်သက် တစ်လ ကျော်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ရင်သွေးမလိ...
အာဆီယံမျှော်မှန်းချက်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ...
ရုရှားသမ္မတ ရေခဲဟော်ကီကစားပွဲ ပါဝင်ကစား၊ ယူကရိန်းအေ...
ထိုင်းအစိုးရ အိမ်တော်ထဲက အဆောက်အဦကို အစိုးရဆန့်က...
ရှမ်းမြောက် ဒေသ နမ့်ဆန်မှာ ဒီနှစ် လက်ဖက် ထုတ်လုပ်မ...
ယူကရိန်းရှိ လူဟန့်စ်နှင့် စလာဗီယန့်စ်မြို့တွင် ခွဲ...
အမုန်းစကားမပြောဖို့ ဖျာပုံတွင် လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြသူတွေနှင့် ရဲ...
တပ်မတော်အနေနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာ တာဝ...
ကျမ စိန်ခေါ်လိုက်ချင်ပါတယ် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ရ...
မိုးပျံကျောပိုးဂျက်ကိရိယာကို Google စမ်းသပ်တီထွင်
လုယက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူကို တွေ့ရှိသဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းဖမ...
Bill Gates ပြောတဲ့ အနာဂတ် အစီအစဉ်
ကိုယ့်အသင်းတန်းဆင်းသွားရင် ကလေးမွေးရသလောက် နာကျင်ခ...
ဗီဒီယိုဂိမ်းကို အချိန်ကြာကြာဆော့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကော...
သွားနဲ့ခံတွင်း သန့်ရှင်းဖို့အတွက် လိုက်နာသင့်တဲ့ အ...
တောင်သူများ သဘောတူညီချက် မရရှိဘဲ မြေအောက်ကေဘယ်ကြို...
စိတ်ဖိစီးလာလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ကျောခိုင်းသွားတဲ့ မ...
ဧရာဝတီမြစ်ထိန်းသိမ်းရေး ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကူ...
ထပ်ဆင့် ထောင်ဒဏ် ၁၃၁ရက် ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ Chris Br...
အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့ ကန်ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင့်ခုနစ်ရာ တ...
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကြွေလာအောင် ဖုန်းပြောနည်း
မြေနီကုန်းခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခွင့်အတွက် ပုဂ္ဂလိ...
နတ်တလင်းမြို့ ဘာသာမတူသူ ရည်းစား (ကောင်လေး) အားအိမ်...
လက်ရှိအခြေခံဥပဒေက ငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်ရဲ့လားဟု လူ...
ထိရောက်စွာ မဖြေရှင်းပေးသရွေ့ သပိတ်စခန်း ဖွင့်သွားမ...
Macbook ကိုလက်ထက်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ မော်ဒယ်
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ cartoon များ
ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး သြစတြီးယားနိုင်ငံက နည...
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ပြောပြတဲ့ ဘန်ကောက်က လူလိမ်တွေအေ...
ကိုယ်ရေး အချက် အလက်များ ကို အခြားသူများ မသိအောင်ေ...
အသားအရည် လှပဖို့ နနွင်းမှုန့်ကို မှီဝဲကြပါစို့
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော တရုတ်နိုင်ငံမှ...
ကြံတိုင်းအောင်ခရီးသည်တင်ကား ရခိုင်တွင် တိမ်းမှောက်...
နိုင်ငံတကာမှာ လှုံ့ဆော်မှု ပြင်းထန်နေတဲ့ Bring bac...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး NLD နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကို ဘယ်လို...
ဒေါ်စုထောက်ပြတဲ့ အမြင့်ဆုံးသြဇာအာဏာတွေရနေတာ ဘယ်အဖွဲ...
မျိုးစောင့်ဥပဒေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်နိုင်အောင် လမ်းလ...
ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေ မူကြမ်း ကန့်ကွက်
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ တပ်မတော်ပါဝင်ဖို့ ဒေါ်အောင...
ဆူဒန် အပစ်ရပ် ရေးသဘောတူချက် အသက်ဝင်ပြီ
နိုင်ငံတကာဘဏ်များ လုပ်ငန်းအပြည့်အ၀ လုပ်ဆောင်ခွင့် ...
တပ်မ ၈၈ ထိန်းချုပ်ရာ သျှမ်း-ကချင် နယ်စပ် ဗုံးထပ်မံ...
ဖွဲ့စည်းပုံရေး စစ်တပ် ပါဖို့ ဒေါ်စုပြော
ဝန်ဆောင်မှုမှအပ စိတ်ဒုက္ခ မျိုးစုံ ရလို ပါသလား လာဟေ့...
Contraceptive pills (2) ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အကောင်း-...
Contraceptive pills ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါကိုယ်ဝန်တား...
ခရိုင်းမီးယားသို့ ရုရှားသမ္မတပူတင် သွားရောက်မှု လောင...
သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၁၃၃/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂ အမှု...
အမွေကိစ္စဖြင့်စကားများရန်ဖြစ်စဉ် ညီမဖြစ်သူမှ အစ်မဖြ...
ကလေးစကား လေးလေးစားစား နားထောင်ပေးပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မအူပင်၌ ဟောပြောသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ...